Sun d'Or, zanaky ny zanany El, dia nandefa ny làlan'ny Tel Aviv-Dubrovnik
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Sun d'Or, zanaky ny zanany El, dia nandefa ny làlan'ny Tel Aviv-Dubrovnik
Sun d'Or, sampana iray an'ny kaompaniam-pirenen'i Israel El Al izay mampiasa ny marika indrindra ho an'ny serivisy fandaharam-potoana sy serivisy amin'ny charter amin'ny ankapobeny any amin'ny toerana eropeana, dia mandefa sidina mivantana avy any Tel Aviv mankany amin'ny tanànan'i Dubrovnik any Kroaty, hoy ny nambaran'ny kaompaniam-pitaterana. Hanomboka ny talata ny sidina, miainga ao Tel Aviv amin'ny 17:00 ary miala an'i Dubrovnik amin'ny 20:30, miaraka amin'ny sidina tokony ho 3:20 ora. Ny zotram-piaramanidina dia faharoa amin'ny sidina mankany Kroasia, manaraka ny sidina misy an'ny orinasa mankany Zagreb.
Dubrovnik dia miverina ho King's Landing, renivohitry ny Fanjakana Fito amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra Game of Thrones. Toa ny Game of Thrones no tompon'andraikitra amin'ny antsasaky ny fitomboan'ny fizahan-tany 10% isan-taona izay hitan'ny tanàna tao anatin'izay taona vitsy lasa izay. Nisy famoahana Dubrovnik nitatitra fa ny volana janoary voalohany ka hatramin'ny jona voalohan'ity taona ity, 393, 895 ny mpizahatany nijanona tao Dubrovnik, izay nitombo 30% tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa.
Vondrona sembana niraikitra tamin'ny fiaramanidina tao amin'ny seranam-piaramanidina Manchester
Ny Canyon Ranch Wellness Retreat dia nanambara fanendrena mpitarika vaovao